Umjelo weFowuni ongenayo mkhulu ... kwaye awufakwanga | Martech Zone
Elinye ishishini elingagcinwanga kakhulu kwaye elinethuba elikhulu kubathengisi kukulandela umkhondo kwefowuni. Njengoko ii-smartphones ziya zisanda kakhulu kwishishini lokufunda ii-imeyile, ukukhangela amashishini, kunye nokuphanda ngokuthenga kwethu-abantu abaninzi ngakumbi ngokulula ucofa inombolo yefowuni bafumana kwindawo. Kwiinkampani ezibhengeza kumajelo eendaba, le yingxaki enkulu kuba bayasichaza gwenxa ishaneli esivelisa umnxeba, isikhokelo kunye notshintsho.
Sinomthengi onalo mbandela-ukubonelela ngenombolo yefowuni efanayo kwintengiso zabo zikamabonwakude njengoko besenza kwindawo yabo, kwintengiso yabo yedijithali, nakuwo wonke umxholo wabo ohlangula abathengi kuluhlu lwemithombo- ukusuka kukhangelo ukuya kwintlalo. Igama elingalunganga ngaphakathi kukuba nabani na ofowunela inombolo ubanjelwe intengiso kamabonwakude- kodwa oku akunjalo kwaphela.
Le infographic ivela Ingeniso, iqonga elisekwe kwilifu elinikezela ngolawulo lomkhankaso, ukubonakaliswa okucacileyo, okusebenzayo kubahlalutyi kunye nezixhobo zokuphucula ukuhambisa.
tags: umnxeba umnikeloukuthengisa umnxebafowunela ukuthengisa okuzenzekelayoukulandelela umnxebaIsoftware yokulandela umkhondo engenayoIifowuni ezingenayoUkuhlaselaukuthengisaefowuni
Epreli 14, 2014 ngo-8: 53 AM
I-infographic enkulu, uDouglas! Iifowuni zinjalo, ke, zibaluleke kakhulu. Elona lizwi liphakamileyo (IMHO) kukuba iselfowuni ayiguquki. Kumava am, ukuba ulandela umkhondo weefowuni, iselfowuni iyaguqula. Kwaye iguquka kakuhle. Kwimeko yeshishini elisekwe kwinkonzo, bayazi ukuba banokufumana isikhokelo kwifowuni inqanaba lokuguqula ukuya kwintengiso liphezulu kakhulu.